.NET sy ML.NET: Platform Open Source Microsoft | Avy amin'ny Linux
.NET sy ML.NET: Platform Open Source Microsoft
Linux PostInstall | | fampiharana
Araka ny efa nodinihintsika tao amin'ny publication naantso "Rafitra miasa amin'ny ady: Microsoft miambina ny rehetra!", amin'izao «Microsoft», Ny orinasan'i Redmond, Etazonia, tompon'ny «Windows» dia eo amin'ny hazakazaka misokatra iray hametrahana ny tsara indrindra amin'ny Operating Systems hafa ary handefa ny vokatra any aminy.
Ary amin'izany fomba izany, ankoatry ny programa efa fantatra nanondrana azy «GNU/Linux», azontsika lazaina ireo ankehitriny: «SQL Server, .Net, Visual Studio Code y Skype». Anisan'ny farany nampidirina, ilay fantatra amin'ny hoe «Microsoft Teams», araka ny noresahantsika tao amin'ny iray hafa famoahana vao haingana. Ary ankehitriny, mitondra antsika mankany «ML.NET», un Rafitra fianarana ny milina de «Código Abierto» ary multiplatform izay mameno «.NET».
Mety ho ireo firoboroboan'ny tontolo iainana mitombo ao amin'ny «Código Abierto» mankanesa ao anatin'ny fotoana fohy, ny «Navegador Edge» ary ny «Antivirus Defender». Ary iza no mahalala, tampoka izao miaraka amin'ny fidiram-bolan'ny «Microsoft Teams» tsy hahagaga raha mahita ny «Suite Ofimática MS Office» na zavatra tena mitovy na akaiky an'io «GNU/Linux».
0.1 Platform Open Source Microsoft
0.2 Inona ny .NET ary inona ny mampiavaka azy?
0.3 Inona ny ML.NET ary inona no mampiavaka azy?
Platform Open Source Microsoft
Araka ny efa nolazainay, amin'ireo maro rindrambaiko (programa, rafitra ary sehatra) de «Código Abierto» tato ho ato «Microsoft» dia nandray anjara tamin'ny «Comunidad de Software Libre y Código Abierto», Miavaha:.NET sy ML.Fandrika harato.
Inona ny .NET ary inona ny mampiavaka azy?
Izy io dia sehatra fampivelarana marobe (Windows, Mac OS sy Linux), loharano misokatra ary maimaim-poana, hananganana karazana rindranasa rehetra: birao, finday, tranonkala, lalao ary ho an'ny Internet amin'ny zavatra.
Mamela ny fampiasana fiteny, tonian-dahatsoratra sy famakiam-boky isan-karazany ho an'ny karazana fampiharana azo atao isan-karazany. Anisan'ireo fiteny ireo:
C #: Izay fiteny tsotra, maoderina, mifantoka amin'ny zavatra ary azo antoka ny fandaharana.
F #: Izay fiteny miasa amin'ny sehatra hafa, sehatra hafa, loharanom-pahalalana misokatra ho an'ny .NET. Izay misy koa ny fandaharam-pampianarana mifantoka amin'ny zavatra sy ilaina.
VisualBasic: Izay fiteny azo idirana miaraka amina syntax tsotra hananganana rindranasa azo antoka karazana sy azo itodihana.
Izy io dia sehatra fampivelarana tsara indrindra, satria mamela ireo fampiharana noforonina tamin'ireo fiteny voalaza etsy ambony ireo mba hihazakazaka eo am-pelatanana amin'ny rafitra fiasa mifandraika amin'izany, noho ny fampiharana samihafa, anisan'izany ny:
.NET Core: Inona no atao hoe fampiharana sehatra hafa ho an'ny tranonkala, mpizara ary fampiharana console.
.NET Framework: Izay mifanaraka amin'ny tranokala, serivisy, rindranasa birao ary maro hafa amin'ny Windows.
Xamarin / Mono: Inona no atao hoe .NET hampandehanana ny rindranasa amin'ny Operating Systems finday lehibe.
Izy io dia mirakitra andiana API fototra izay iraisan'ny rehetra .NET fampiharana. Ho fanampin'izay, ny fampiharana tsirairay dia afaka mampiharihary API fanampiny izay manokana amin'ny Operating Systems izay andehanany. Ohatra, ny .NET Framework dia fampiharana Windows. Ihany .NET izay misy API ho fidirana amin'ny Windows Registry.
Izy io dia manana tranomboky goavambe (ecosystem of packages) izay manitatra ny fampiasa azy. Raha hampiasa azy ireo dia azonao atao ny mampiasa NuGet, izay mpitantana fonosana namboarina manokana «.NET» misy fonosana maherin'ny 90.000.
Fanamarihana: raha mila fanazavana fanampiny momba «.NET» midira amin'ny tranokalanao ofisialy eto.
Inona ny ML.NET ary inona no mampiavaka azy?
Izy io dia sehatra maimaimpoana maimaimpoana, loharanom-pahalalana ho an'ny Machine Machine izay smandeha amin'ny Windows, Linux ary macOS ianao miaraka amin'ny .NET Core na amin'ny Windows mampiasa ny .NET Framework.
Manolotra ny fahafaha-manampy ny fianarana milina amin'ny rindranasa (an-tserasera na an-tserasera) noforonina tamin'ny .NET, mba hahafahan'izy ireo manao manaova faminaniana mandeha ho azy miaraka amin'ny angona ilaina.
Manana toy fototra a modely fianarana milina izany mamaritra ny dingana ilaina hanovana ny angon-drakitra ho vinavina. Ity sehatra ity dia ahafahanao mampiofana maodely manokana amin'ny alàlan'ny famaritana ny algorithm, na ny fampiasana iray noforonina, misy ary efa voaofana avy amin'ny sehatra TensorFlow sy ONNX.
Ny kinova 64-bit dia mifanaraka amin'ny sehatra rehetra. Ny kinova 32-bit dia mifanaraka amin'ny Windows, afa-tsy ny fiasa mifandraika amin'ny TensorFlow, LightGBM, ary ONNX.
filazana «Microsoft», ohatra mety hitranga amin'ny karazana faminaniana azo atao «ML.NET» Izy ireo dia:
Famaritana sy ny sakany
Fanasokajiana sy fanasokajiana Ataovy ho azy tsara ho tsara sy ratsy ny hevitry ny mpanjifa.
Ny soatoavina famerenam-bidy sy faminaniana mitohy Maminany ny vidin'ny trano miankina amin'ny habe sy ny toerana misy azy.
Detection Anomaly Fantaro ny fifanakalozana banky hosoka.
tolo-kevitra Soso-kevitra ny vokatra azon'ireo mpiantsena an-tserasera mividy, mifototra amin'ny fividianany teo aloha.
Andian-tantara sy angon-drakitra mifandimby Varotra ny toetrandro sy ny vokatra mialoha
Fanasokajiana sary Manasokajy ny pathologies momba ny sary
Fanamarihana: raha mila fanazavana fanampiny momba «ML.NET» midira amin'ny tranokalanao ofisialy eto.
Manantena izahay fa izany ianao "lahatsoratra kely nefa mahasoa" momba ireo 2 mahaliana ireo «Plataformas de desarrollo y Machine Learning de código abierto» de Microsoft antsoina hoe «.NET y ML.NET», izay eo amin'ireo tombontsoa na toetra mampiavaka azy, dia mampiavaka azy (fahamendrehana), ny fahaiza-mihetsika sy ny fahaizan'ny fampidirana, dia mahaliana sy mahasoa indrindra ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahafinaritra sy goavambe ary mihamitombo ny fampiharana sy ny «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » .NET sy ML.NET: Platform Open Source Microsoft
Tsy ara-dalàna ny fanenjehana an'i Rambler amin'i NGINX ary izy koa manana fitoriana amin'i Twitch
Wireshark 3.0.7, afaka manamboatra lesoka amin'ny fiarovana